Madaxwayne Trump Oo Muujiyey In Uu Iskaga Tegayo Aqalka Cad Ee Looga Arimiyo Dalka Maraykanka – Borama News Network
Madaxwayne Trump Oo Muujiyey In Uu Iskaga Tegayo Aqalka Cad Ee Looga Arimiyo Dalka Maraykanka
Donald Trump ayaa sheegay inuu ka tagayo Aqalka Cad hadii Joe Biden si rasmi ah loogu caddeeyo inuu yahay madaxweynaha xiga ee Mareykanka.
Madaxweynaha ayaa diiday inuu aqbalo guuldaradii ka soo gaadhay codbixintii 3 November, wuxuuna saxaafada u sheegay khamiistii inay adkaan doonto in la ogollaado.
Waxa kale oo uu mar kale ku celiyey sheegashooyin aan caddayn lahayn oo ah musuqmaasuq codbixineed.
Mr Biden wuxuu ku hogaaminayaa Mr Trump 306 cod halka uu helay 232 iyadoo la raacayo nidaamka ergada doorashada ee lagu soo xulo madaxweynayaasha Mareykanka.
Tirada ayaa aad uga badan 270 oo ah intii loo baahnaa in lagu guuleysto, Mr Biden ayaa sidoo kale hoggaaminaya codbixinta dadweynaha in ka badan lix milyan.
Codbixiyeyaashu waxay kulmi doonaan bisha soo socota si ay cod rasmi ah uga dhigaan, iyadoo Dimuquraadiga Joe Biden loo dhaarin doono xilka madaxweynenimada 20-ka bisha Janaayo.
Madaxweynaha iyo taageerayaashiisa ayaa dacwado dhowr ah oo dhanka sharciga ah u gudbiyey doorashada, laakiin badankood waa ladiiday.
Horraantii toddobaadkan, Mr Trump wuxuu ugu dambayntii ogolaaday diyaarinta kala-guurka rasmiga ah ee kooxda madaxweynaha la doortay ee Biden inuu bilowdo, ka dib dhawr toddobaad oo uu hubaal la’aan ahaa.
Go’aanka ayaa ka dhigan in Mr Biden uu awood u leeyahay inuu helo warbixino sare oo dhanka amniga ah isla markaana uu galaangal ugu yeesho saraakiisha muhiimka ah ee dowlada iyo lacago malaayiin doolar ah isagoo isku diyaarinaya inuu la wareego 20ka Janaayo.
Maxaa uu yidhi Trump?
Markii la weydiiyay Khamiista inuu aqbali doono inuu ka tago Aqalka Cad hadii uu ku guuldareysto codeynta ergada doorashada, wuxuu yidhi: “Xaqiiqdii waan ka tegi doonaa, xaqiiqdii waan tegi doonaa waadna ogtihiin taas.”
Si kastaba ha noqotee, wuxuu sii waday inuu dhaho “hadii ay doortaan [Joe Biden], qalad ayeey sameeyeen”, wuxuuna soo jeediyay inuusan marnaba aqbali doonin in laga adkaado.
“Waxay noqon doontaa wax aad u adag in la qirto maxaa yeelay waxaan ognahay inay jirto khiyaano aad u weyn,” ayuu yidhi, eedeyn uusan cadeyn u soo bandhigin.
Ma uusan caddayn inuu ka qeyb galayo caleema saarka Mr Biden iyo in kale.
Nidaamka doorashada Mareykanka, codbixiyayaashu si toos ah uma doortaan madaxweynaha xiga. Ta abadalkeedd, waxay u codeeyan saraakiisha 538, kuwaas oo loo qoondeeyey gobolada Mareykanka iyadoo lagu saleynayo tirada dadkooda.
Madaxweynaha la doortay wuxuu u dabaaldegay mahadnaq aamusnaan ah Khamiistii, maalinta dalkaasi looga yaqaan maalinta mahadnaqa iyada oo kiisaska coronavirus ee Mareykanka ay sii kordhayaan.
Diyaarada Drone-ta Turkiga Ee Bayraqdaar Oo Hawlgalo Basaasnimo Ka Fulisay Gudaha Dalka Ruushka Iyo Sobobta
Nin Masaajid Dad Ku Laayay Oo Xukunkii Laga Khafiifiyay Iyo Sobobta Keentay Khafiifintaasi
Siyaasi Ka Tirsan Kulmiye Oo U Jawaabay Hogaamiye Xirsi Kana Hadlay Safarka Muuse Biixi
Hillary Clinton Oo Ku Howlan Filim Ka Cadheysiinaya Turkiga Iyo Waxa Uu Ku Saabsanyhaay Filinkaasi
Bnnstaff Bnnstaff February 20, 2021
Beesha Caalamka Oo Si Kulul Uga Hadashay Heshiiskii Ka Soo Baxay Shirkii Muqdisho